Haawwotiin hiyyummaafi qilleensa faalameef saaxilaman ijoollee IQ gad’aanaa qaban dayan, jedha qorannoon - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Fayyaa fi Jaalala Fayyaa fi Hawaasa Haawwotiin hiyyummaafi qilleensa faalameef saaxilaman ijoollee IQ gad’aanaa qaban dayan, jedha qorannoon
Haawwotiin hiyyummaafi qilleensa faalameef saaxilaman ijoollee IQ gad’aanaa qaban dayan, jedha qorannoon
Erga dhalatanii booda jiruu gaarii qabaachuufi naannoo bareedaa keessatti guddachuun guddinaafi fayyaa daa’immaniitiif, isa qaamaafi sammuu, baay’ee murteessaa ta’uu isaa saayinsiin kan irratti wolii gale fakkaata. Tibbana qorannoon haarofni tokko kan argisiisu qorattoonni fayyaa dhiibbaa dhimmoonni lameen gara gubbaatti tuqaman kunniin daa’imman garaa haadhaa jiran irratti qaban yeroo dheeraadhaaf hordofaa turuu isaaniiti.
Bu’aan qorannoo kanaa ifa. Haadha hiyyeettiifi isii naannoo qulqullina hinqabne (qilleensa faalame) keessa jirattu irraa dhalachuun IQ (dandeettii sammuu) gad’aanaa ta’e qabaachuudha, akka qorannoon qorattoota Colombia Center for Children’s Environmental Health ifa godhetti. Qorannoon kuni kan ifa taasise ijoolleen haawwootii yeroo ulfaatti rakkoo garagaraatiif saaxilaman irraa dhalatan daraboo isaanii kanniin haawwotii hedduu rakkoo hinargine irraa dhalataniin wolbira yoo qabaman IQ hedduu gadi bu’aa ta’e qabu. IQ dadhabaa qabaachuun jireenya gara funduraa (keessattuu barnoota ) irratti dhiibbaa kan qabu ta’utu himama.
Qorannoon kuni haawwotii 276 irratti kan taasifame. Madaalliin hiyyummaa qorannon kuni xiyyeeffannaa itti laate rakkoo nyaataa, uffataafi mana jireenyaa ufkeessatti ammata. Gama biraatiin madaallin faalamiinsa qilleensa aara konkolataa, tamboo, gaazaafi worshaatiif saaxilamuu ilaallata.
As tuquudhaan qormaata IQ fudhachuu dandeettan.
Previous articleBaankiin biyya Turkii Ziraat Itoophiyaa keessati damee isaa banachuuf
Next articleHiriirri Beta Israa’eloonni Israa’el keessatti geggessan gara hookkaraatti geeddarame